Kowdii bishan ayaan qoray qormo magaceedu ahaa: “Gulufka xildhibaannada gaatinta Shariif Xasan iyo gaabiska dunida”, aan ku saabeeyey halka siyaasaddu saldhigan doonto, saamileydeeduna sardhigi doonaan iyo sanadkan curtay sida wax ku socon doonaan, sida cinwanka qormadii hore ku cad, waxay taabanaysay ragga xilka qaaday (Tiro badnayaal tayo yarayaal), ninka laga qaaday xilka (Shariif Xasan) iyo qaabiyayaasha Mahiga ugu horreeyo, sadax xagalkan oo majaraha u haya muranka jira.
Maanta kooda uu gobo’ leh ayey is doorteen, arrin ku cusub dhaqanka siyaasadda Soomaalida, ammaan uma ahan, balse sida wax isu rogeen ayey kuu muujinaysaa, ninkii shalay Shariif Xasan ku daba fayshanaa, waxa maanta dhanka kale ka soo jeediyey, waa arrin is weydiin mudan, ugu dambayn waa la isu tanaasulay, tanaasulkaa ma mid iska dhacaybaa? Mise hore ayuu u qorshaysnaa? Yaa garan, sida wax loo sheego u qaata ayey nagu yiraahdeen, warna ha ka keenina.
Madoobe nuunow haddii loo tanaasulay, dadkase la qabadsiiyey waa la doortay, ayaa mar qura mashxarad lagu dhuftay, alalaas iyo sacab isqabsaday, miyaan la qaangaarin? Miyaan garaadku kobcin? Miyaan maalmaha wax laga baran? Miyaan dhacdooyinka wax lagu fahmin? Dadkayga caadifad ayaa caqli ka nigaxday, dahaarna ka saartay, waa meeshuu ninkii waalnaa ka yiri: “Maxaa la iiga alalaasayaa haddaan lumayaa haddanee!”.
Waxaase su’aasha ugu muhimsani tahay waa kuma Madoobe Nuunow? Waa Cornell ciidanka xoogga dalka ah, wax ku bartay Kuliyadda Jaalle Siyaad, xubin firfircoon ka ahaa shrkii Baydhabo lagu qabtay sandkii 1995-tii, oo looga arrinsanayey maamul u samaynta gobolka, waxaa shirkaa ku wehliyey malaaqyada deegaanka iyo siyaasin ay ka mid yihiin: Zope, Avvocato Xasey, Dr Maxa’ed Cali Xasan, oo wasiir ma dhaca ah ka ahaa maamulkii military-ga, Shariif Xasan (Sakiin), Shaati guduud, Cali Marguus, Shariif Saalax, Cali Cabdi Garruun iyo xubno kale.
Madoobe Nuunow wuxuu kale oo xubin ka ahaa jabhaddii RRA, sidoo kale maamulkii Koofur galbeed Soomaaliya, wuxuu xildhibaan ka soo noqday dawladdii Carta, wuxuu dhaxal siyaasadeed ku galay baarlamaankii Dawladdii C/laahi Yuusuf, ka dib dilkii Cabdalla Deerow Isaaq, sidaana wuxuu ku noqday wasiirka Federlka iyo dastuur.
Hal adayggaa oo aan isleeyahay waxay qaybweyn ka tahay taageerada iyo mashxaradda xigtay doorashadiisa, malaha waxay dad badani quuddarranayaan siduu maalintaa u hadal caddaa, inuu u hadal caddaan doono! Waxaanse oran , meeshaa nin gala oo dhiigle lama sheegi, armay isna sidaa oo kale ku dhacdaa, Aniga garan waayey waxa dhiigga ka miirta? Sida looga miirto? Ito inta laga miirto?.
Inta aanan ku sii dheeraan wixii doorashada la falgalay, aan wax yar ka iraahdo hadalkii madaxweyne Shariif, oo wax kama jiraanka ka dhigay go’aanka xildhibaannada, isagoo cuskanaya heshiis dhagreedka ay wada galeen isaga iyo wadaaygiis Shafiif Xasan, oo qoorta looga qabtay Formaajo, ee dadka ku yiri: danta umadda ayaan u tanaasulay”, been badanaa!
Si loo sii adkeeyo, madaxweyne Shariif wuxuu shir la yeeshay guddiga amniga qaranka, bal waxa isugu yimid eeg, labada Shariif, Gaas, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka cadaaladda, ku xigeenka gudaha iyo amniga qaranka, waa su’aale maxaa Shariif Xasan ka quseeya Amni? Teeda kale wasiirka Gaashaandhigga haddii madaxweynugu yahay abaanduuliyahya ciidanka qaranka, uuna shirka fadhiyo, isna muxuu ka dhex qaban? Ma garan, war maa nin walbaa ku ekaado shawshiisa, iyada ayuusanba dhammayn karine, guddigu wuxuu soo saaray:
a) In kulamadii xildhibaannada ee lagu dagaalamay iyo go’aannadii ka soo baxay ay ahaayeen kuwa aan ku fadhin sharci, isla markaana waxba kama jiraan ah.
Qodobadan lagu xusay warsaxaafadeedka, waxay kuu muujinayaan kala fogaashaha jira inta uu la egyahay, qolo guddoon cusub ayey dooratay, qolada kalana waxay billowday cagajuglayn, waxaaba u sii dheer inay waqtiga ka hor dhacayaan, maadaama ay xoogga saarayaan in la boobsiiyo ansixinta dastuurka, waaba su’aale haduu qabyo qoraal yahay sidee lo ansixinayaa? Yaase ansixinaya? Ma rag ay u aqoon sadeen inay falal dambiyeedyo galeen, ayey haddana dastur u gaysanayaan? “Baarlamankan waxaa badalaya baarlamaan la soo doortay” waa qodob ku qoran axdiga kmg ah, haddaba sidee la isu waafajinayaa? Isu kay qaban waysay waallida jirta.
Halkan waxaan doonayaa inaan ka sameeyo baafin siyaasadeed, yaa meel ku sheega mudane Mahiga? Markii u dambaysay wuxuu ka dhoofay Puntlad, oo uu uga qaybgalay shirkii Garoowe, isagoo ku sii jeeday magaalada Nairopi, ka dib wax warkiisa sheega lama maqal, malaha wuxuu la suuxay qoraalka Keydmedia ka diyaarisay: “Biladda Hormuudyada Xadgubdka 2011!”, oo uu kaalinta koowaad ka galay, qofkii Mahiga warkiisa haya, ha ku soo hagaajiyo hogta halyeeyada halaagga.
Inta qaskan iyo qalalaasani dhacayeen, kuwa isku sheega xiriirka caalamku way daawanayeen, waxayba doonayaan inay shir qabtaan, oo yaad u qabanaysaa, haddii ay sii burburayso DKG ah? Hadda waxaa noo jooga lama guddoomiye baarlamaan, waxaan sugaynnaa waa lama madaxweyne iyo laba xukuumad, inay imaanaysana ha baciidsan, nimanku ma ahan rag xishooda, ethics iyo akhlaakh midna ma lahan, mana doonayaan inay dhawraan axdi iyo xeer.
Shariif Xasan wali wuxuu ku dhaggan yahay Kampala Accord, iyaga ayaana u ansixiyey, Allow yaa baara, Madoobe Nuunowgan inuu u codeeyey ayaa suuragal ah! Waxaa garab taagan Madaxweyne Shariif Gaas iyo xukumaddisa, dabcan maamulka Puntalad ha ka tagin, oo iyaga ayaaba ka qaybgaliyey shirkii Garoowe, isagoo lagu daba dhaggan yahay, aamuska dunida oo labada taageero u noqon karta, nin walba garabsan doono, taageero ayaaba jirta sida dad qabaan u janjeerta Shariif Xasan.
Dhanka Madoobe Nuunow, dad badan waxay ku dhaiilayaan inuu daab u yahay qabqablayaashii, sida: Cismaan Caato, Muuse Suudi, IWM, dhinacna waxaa lagu tuhmayaa inay garab u yihiin rag dhiigyacab siyaasadeed ah sida: Gacmadheere iyo Ilka Dahab, bal ila xasuusta Gacmadheere markuu ahaa wasiirka arimaha gudaha dawladdii C/laahi Yuusuf, imisa ayaa dad la gumaaday, waiba isagu u soo horkacayey, kaaga darane ay hayb iyo habar wadaag ahaayeen.
Cabsida ayaa ah, in Madoobe Nuunow nagu soo nooleeyo qabqablayaashii siyaasadda iyo dagaal oogayaashii Xamar, hubaal in muddo la moogaa, balse mudadaa miyaa la nastay? Waa maya jawaabtu, shacab ay madax u yihiin laba Shariif mindhaa nasiino ma arkaan! Dhanica kalana ay xeerbeeg u yihiin ma xishooyadaasha ku jira xerada xildhibaannada, midna sheegid uma baahna, Madoobe Nuunow oo la doortay mayee loo tanaasulay, waxba ma ahan oo waan og nahaye, muxuu badali karaa waaye, su’aashu?.
Loolanku wali waa ligan yahay, oo codna libintu ma raacin, lagdan ayaa wali laaban, lammaane maanta wada luqmaysanaya ayaa berri lafaha isla dhici doona, luggooyada iyagu isuma laabaan, ee shacabka luufluufka ah ayey ku sii larayaan, malaha waaba qorshe la maleegay, bal ila eeg, dalka dhan ayaa holcaya, oo xabbad ka socotaa, markaas ayey nagu mashquuliniyaan hebel ayaa xilka laga qaaday, isna waa diiday,markaa ayaa mid kale la doortay.
Sheeko caruureed, Xabashi waxay kuu fadhidaa gobolada dhexe, Beledweyn, Dhuusamareeb, Bulucle iyo meelo kale, Kenyaanti Gedo iyo Jubbooyinka ayuu xasuuq ka wadaa, duqayn iyo dabar goyn ayey dabada hayaan, dhanka kale abaarihii ayaa wali taagan, arimahaa xasaasiga ah ayey doonayaan inay naga sii jeediyaan, ee nagu mashquuliyaan doorashooyin dhalanteed ah iyo mucaaaradnimo aan meel jirin, dadkaygoow hurdada ka kaca.
Ugu dambayn waxaan ku soo xeriayaa qormada xa’laydan, aan ka xigtay sida xaalku yahay waana sida:Xildhibaanoow xaa qaado, xukun leexsan, xagal laaban, xeero maran, xeerin la’aan, xanaf taagan, xanuun badan, xabbad wiiftaa, xuurto furan, xadro wadaad, xigmad la’aan, xaaraan ku naaxnimo, martinimo Xabash, xannib fadhi, xirasho gole, xil ka qaadis, is xajin, xoog adeegsi, is xusulayn, xil xalaalayn, maxaa xiga?.
Previous Previous post: Doqon diran iyo daacad dabran!